Uyicima njani iApp kwi-iPhone yakho
NguEdward C. Baig, uBob LeVitus
Ungasusa usetyenziso kwi-iPhone yakho ngeendlela ezimbini: kwi-iTunes kwikhompyuter yakho okanye ngokuthe ngqo kwi-iPhone yakho. Ukucima usetyenziso kwi-iTunes, cofa iiapps kuluhlu lomthombo kwaye ucofe i-icon yohlelo lokusebenza ukuze ukhethe kwaye ukhethe u-Hlela → Cofa okanye ucofe ekunene (okanye ucofe uLawulo kwi-Mac) i icon yeapp kwaye ukhethe Cima.
isazisi sepilisi m365 emhlophe
Nokuba yeyiphi indlela, ubona incoko yababini ibuza ukuba uqinisekile ukuba ufuna ukususa usetyenziso olukhethiweyo. Ukuba ucofa iqhosha lokususa, usetyenziso luyasuswa kwi Ithala leencwadi iTunes , Kananjalo nakwisiphi na isixhobo se-iOS ivumelanisa nelayibrari yakho iTunes .
Ungayicima njani iapp kwi-iPhone
Ngelixa ucima usetyenziso ngeTunes kwikhompyuter yakho yindlela elungileyo, awusoloko ufumaneka nge-iTunes. Akukho ngxaki - ungasusa okanye ususe naziphi na usetyenziso ngqo kwifowuni yakho ephathekayo. Nantsi indlela yokucima nayiphi na i-app yomntu wesithathu kwi-iPhone yakho:
1Cinezela kwaye ubambe nayiphi na i icon kude kube zonke ii icon ziyaqala ukujijeka.
Awunakucima naziphi na iiapps zeApple ezize ne-iPhone yakho (umzekelo - Imiyalezo, Useto, iwotshi, kunye nokusetyenziswa kwekhamera akunakukhutshwa okanye kususwe).
MbiniThepha u-x omncinci kwikona ephezulu ngasekhohlo ye-app ofuna ukuyicima.
Incoko yababini iyavela, ikwazisa ukuba ukucima le app kususa yonke idatha yayo.
3Cinezela Cofa iqhosha.
Ukucima usetyenziso kwi-iPhone yakho ngale ndlela ayilahli ngokusisigxina. Insiza ihlala kwilayibrari yakho iTunes de uyisuse kwi-iTunes. Beka enye indlela: Nokuba uyicimile i-app kwi-iPhone yakho, isekwilayibrari yakho iTunes.
Ukuba ufuna ukulahla usetyenziso olulungileyo kwaye uhlala ulicima kwi-iPhone yakho, kuya kufuneka uyicime kwithala leencwadi lakho le-iTunes. Nalapho ayisiyiyo ngokwenene umkile unaphakade ngenxa yokuba unokukhuphela iiapps ezithengiweyo kwakhona simahla.
morphine sulfate yomlomo isisombululo ixabiso ixabiso
indlela yokwabelana ngealbham yefoto
Ngaba icaffeine inokubangela iintloko
nditshixe izitshixo zam emotweni
iziphumo ebezingalindelekanga ze-keflex kubantu abadala